I-American Alsatian: Umhlahlandlela Wokugcina wenja efana neWolf - Izinhlobo
Ifuna i- inja efana nempisi ? Ngabe ufuna i-canine enkulu njenge umngane ? Kufanele uthole i-American Alsatian.
Lezi zingulube ezingavamile zingabukeka njengezimpisi, kodwa zinjalo mnene futhi enobungane izidalwa.
Futhi banendaba enkulu yemvelaphi eholela ekubukekeni kwabo kwamanje, ubumnene obuhle, nempilo enhle.
Yini enye ekhona ngalesi silo esiyimfihlakalo? Funda ukuze uthole okuningi nge-Alsatian.
Yini i-American Alsatian?
Ngabe i-American Alsatian ibukeka kanjani?
Umngane Omkhulu Omkhulu
Ungayinakekela kanjani i-American Alsatian yakho?
Ngabe i-American Alsatian inezinkinga zempilo?
Ngiyithola kanjani i-American Alsatian yami?
I-American Alsatian vs. Ezinye Izinhlobo Ezifana Zokufuna
Ngabe i-American Alsatian iyinja ekufanele?
I-American Alsatian (ebizwa nge-AL-SAY-SHAN) uhlobo olukhulu olwenzelwe ubungani.
Imvamisa izinja ezihambisana nazo zincane. Ngakho-ke akuvamile ukuthi i-canine enkulu efana ne-Alsatian ithathe indima efanayo.
Konke kwaqala eminyakeni engama-30 eyedlule ngeDire Wolf Project.
Umlando wase-American Alsatian: Iphrojekthi ye-Dire Wolf
Ngesikhathi sokwanda kwezintshisekelo zezimpisi ngo-1987, uLois Denny (manje osenguLois Schwarz) wayefuna i-canine ebukeka njengempisi ngaphandle kwegazi lempisi kwazise inzalo yakhona yaba yizilwane ezifuywayo ezinzima.
USchwarz ukhethe ngokukhethekile impisi ebabazekayo ukudala inja efana nomuntu oyimpisi, yingakho igama lephrojekthi. Okwangempela ithi impisi ingumlando futhi yaziwa njengenye yezimpisi ezinkulu ezake zaba khona. Babengasekho ngesikhathi sePleistocene Epoch - okwakuyiminyaka eyi-11,000 edlule!
Ngo-1988, uSchwarz wakhiqiza udoti wokuqala ngokuxuba i-Alaskan Malamute kanye ne-German Shepherd - ekuqaleni wabiza lolu hlobo, IShepalute yaseNyakatho Melika . Eminyakeni eyalandela, wanquma ukufaka i-English Mastiff kanye ne-Anatolian / Great Pyrenees mix.
Wakhetha lezi zinja ukuze i-American Alsatian ibe nalezi:
I-Alaskan Malamute ne-German Shepherd’s usayizi wekhanda, umzimba, imisipha, izinyawo, umsila omfushane, nobumnene (kuyaqabukela kukhonkothe).
IsiNgisi Mastiff’s ikhanda elikhulu namathambo ayindilinga agcwele.
I-Anatolian neGreat Pyrenees mix’s ugebhezi, isifonyo, ubude, umsila omfushane, imibala, nobumnene (ubuhlakani).
Ngo-2004, lo mhlobo waqanjwa kabusha Alsatian Shepalute - U-Alsatian ovela egameni langaphambilini laseJalimane elithi 'Alsatian Wolfdog', kanye nomxube weShepherd noMalamute.
Eminyakeni eyisithupha kamuva, njengoba le nja isakhiwa njenge-purebred, banquma ukunika lo mhlobo igama elifanele ngokwengeziwe ngokushiya iShepalute bayishintshe ibe yi-American Alsatian.
Amakilabhu amakhulu kennel afana neAmerican Kennel Club (AKC) namanje angazi lolu hlobo. I-Alsatian ibhaliswe kuphela kwi-National American Alsatian Registry.
Kepha le nja ineklabhu yayo yenja, iNational American Alsatian Club ( I-NAAC ), ebiphethe iDire Wolf Project kusukela ngo-2004.
Ngokusho kukaSchwarz, ukuphuma kolunye uhlobo kuyasiza gcina impilo enhle . Ixuba izinto futhi ibuyisele emuva izingqinamba zezempilo.
Yingakho ehlule i-Alsatian kwezinye izinja ezinjenge:
I-Irish Wolfhound ngogebhezi lwayo, ukuphakama, ijazi locingo, ukuqonda, nokuhlakanipha ngokomzwelo.
I-Labrador retriever ngezinyawo zayo, umsila omfushane, imibala, kanye nobuhlakani.
Samoyed ngamehlo ayo ayisiyingi, umsila omfushane, nobungani.
Akita ngekhanda, izindlebe, umzimba, umsila omfushane kanye nobubanzi.
Ngemuva kwakho konke lokho kweqa, i-Alsatian ayinabo ubuzali bayo bobuzali nokubukeka. Ngakho-ke yini ebenza bahluke?
Ukuqhathanisa i-Alsatian nezinja zabo zesisekelo sesitoko
Ama-canines asetshenziselwa ukuthuthukisa uhlobo olusha abizwa nge-foundation stock dogs. Ku-Alsatian, kwakungu-Alaskan Malamute no-German Shepherd.
Ngale nhlanganisela yeShepalute, uSchwarz wacabanga ukuthi basabukeka befana kakhulu noMalusi waseJalimane. Uthathe isinqumo sokudlulela ezinhlotsheni eziningi, wasinika i-American Alsatian esinayo namuhla.
I-American Alsatian vs. German Shepherd
Uma kuqhathaniswa ne- Umalusi waseJalimane , i-American Alsatian inkulu futhi inzima. Banengubo ende edinga ukugcinwa okuningi, kodwa bangakwazi ukubekezelela isimo sezulu esibanda kangcono.
Ama-Alsatians nawo kunempilo futhi ube nebanga eliphakeme lempilo. Badinga ukuzivocavoca umzimba okuncane futhi babe nezinga lomsebenzi ophansi. Ngakho-ke uma ukhetha inja esebenzayo kakhulu, abelusi baseJalimane bayindlela engcono.
I-American Alsatian vs. Alaskan Malamute
Komunye umzali, ama-American Alsatians anjalo okukhudlwana kune Izinhlekelele zase-Alaskan . Bane- ijazi elide okudinga ukuzilungisa okwengeziwe, kepha ama-Malamute angabekezelela isimo sezulu esingesihle.
I-Alaskan Malamute inenkani kakhulu kune-American Alsatian. Noma ngabe i-Alsatian iyi kunempilo , iMalamute inesikhathi eside sokuphila.
Ungase ucabange ukuthi izimpisi ezimbi ezivela ochungechungeni oludumile lwe-TV Game of Thrones yi-Alsatian, kanti akunjalo.
Ama-Alsatians aseMelika anokucacile ukubukeka nosayizi lokho kuzenza zifane kakhulu nempisi yangempela ebabayo.
Le canine inayo izindlebe eziyindilinga, ezingunxantathu ahleli phezu kwawo ikhanda elibanzi nelitshekile . Okwabo okwenziwe ngama-alimondi amehlo ingaba mncane noma ibe naphakathi futhi ibe nombala phakathi kokuphuzi nonsundu okhanyayo. Abakwa-Alsatia bane- ikhala elimnyama , kodwa yabo isifonyo esimnyama kungenzeka kwesinye isikhathi kube ukhilimu noma umhlophe.
Le nja enkulu ine kwemisipha futhi umzimba omude kugcina ngo ububanzi, umsila onamathele . I-Alsatian ine isakhiwo amathambo obukhulu futhi obukhulu kuhlanganiswe ne ububanzi emuva nasesifubeni .
I-American Alsatian inezinhlobo ezimbili zejazi, hhayi kukhona i-hypoallergenic.
Okujiyile ijazi lasebusika ijazi elimbili elinenwele langaphandle eliqatha futhi eliminyene nengubo yangaphansi ethambile. Inobude obumaphakathi, enikeza ukubukeka koboya okuncane kule canine.
I- ijazi lasehlobo mncane futhi mfushane ngayo yonke ingubo yangaphansi ekhishiwe, kusale izinwele zangaphandle kuphela.
Le hound inemibala eminingi yejazi, ene i-sable yesiliva njengokufiseleka kakhulu. I-American Alsatian nayo iza:
Impisi esiliva grey / sable
I-Tri sable grey yegolide
Lapho uthola umdlwane wase-American Alsatian, ungakhathazeki uma engakhombisi noma iyiphi yale mibala. Bazalwa bephethe ibhantshi elithambile elimnyama elikhanyisa kokhilimu.
Bazoba nebhantshi labo elidala elixakile ngesikhathi abajika ngaso Unyaka-1 ubudala .
Bakhulu kangakanani ama-Alsatia aseMelika?
I-Alsatian iyi sikhulu noma sikhulu inja lapho abesilisa bengakhula khona Amasentimitha angama-26 kuya kwangu-32 (66 kuya ku-81 cm) ubude futhi unesisindo phakathi Amakhilogremu angama-90 kuye kwayi-110 (41 kuya ku-50 kg). Izinsikazi ziba cishe Amasentimitha angama-25 kuya kwangu-28 (64 kuya ku-71 cm) ukuphakama futhi unesisindo se- Amakhilogremu angama-85 kuye kwayi-105 (39 kuye kuma-48 kg).
Imidlwane yaseMelika ifinyelela usayizi wayo okhule ngokugcwele lapho ifinyelela eminyakeni yobudala emi-3, futhi isengagcwalisa ize ibe neminyaka engu-9 ubudala.
Ngosayizi wabo omkhulu, bona ngeke ngikhululeke ngihlala efulethini elincane. Kungcono ukuthi lolu hlobo luhlale ekhaya elinegceke elibanzi.
Noma lolu hlobo lubukeka njengesilwane sasendle, bamnene njengewundlu. Kungenxa yokuthi uSchwarz wayefuna ukuthi i-Alsatian ibe nobumnene bobungani.
Ake sibheke ukuthi le hound iphume kanjani.
Unokubukeka kwempisi kodwa ubuntu bewundlu
Zibukeka ziyingozi, kodwa azinalo ulaka noma zasendle. Asikho isidingo sokubesaba njengoba i-American Alsatian iyi unobungane futhi ongenekayo , kodwa futhi le nja ingaba njalo ozimele kubantu ongabazi. Badinga ukuhlangana okuhle ukuze bazi ukuthi obani abangabazi abangabangani noma izinsongo ezingaba khona.
Ekhuliselwe ukuba yisifuba esikhulu soboya, akumangazi ukuthi le canine ihambelana nemindeni. Ama-Alsatians angama-hound mellow angasebenzelana kahle nezingane, asuse isici esijabulisayo sezinye izinhlobo. Bakhetha ukuphumula kusofa nabathandekayo babo.
Bazwana nezinye izinja nezilwane ezifuywayo ngoba bona awunayo idrayivu yezisulu ephezulu .
I-hound enkulu kepha ithule njengegundane
Uma ufuna inja ethule, le canine inketho enhle kakhulu. I-American Alsatian kuyaqabukela ukukhonkotha, ukukhala, noma ukukhala . Okubi - awukwazi ukuthembela kubo njengezinja zokuqapha.
Akuzona izidalwa ezinobutha noma ezinolaka. Kepha usayizi wabo omkhulu nezici ezishayayo zanele ukwenza izinsongo eziningi zihambe.
Abakwazi ukuba yinja yokubuka, kodwa bahlukile njengo inja yesevisi noma yokwelapha .
I-Alsatian iyinzalo ezolile, ebavumela ukuthi basebenze njengezinja zokuhamba noma inja yokuthola isithuthwane futhi basize abantu abane-PTSD, ukungezwa kwezindlebe, kanye ne-autism. Uma nje kungewona umsebenzi onokhahlo, bangawusingatha.
Umngane wakho wasekhaya
I-American Alsatian ithambekele ekubeni yindawo futhi ikhetha ukuhlala ekhaya. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ezinkulu, le pooch ayihambi futhi ibaleke ekhaya. Ngakho-ke naphezu kosayizi wazo, ngeke uthole i-wolfy canine yakho yeqa ngaphezulu noma yemba ngaphansi kocingo lwakho.
Uma ufuna lolu hlobo, uzobe uthola inja ebambelelayo. Inja le yaziwa ngethemu I-Alsatian ‘bonding’ , okusho ukuthi uma abanikazi babo belahlekile, bazosuka ngokushesha bayobathola.
Lezi zinja ezithembekile zizonamathela eduze kwamakhosi azo ngangokunokwenzeka. Zilungiselele inja yethanga elingamakhilogremu ayi-100 ebingavumeli usayizi ungene endleleni yokugona noma ukuhlala kuwe.
Ilungele abanikazi abangasebenzi kangako
Uma ufuna inja ehlehlisiwe, lolu hlobo luyisinqumo esifanele! Noma bebukeka sengathi bangakhuphuka intaba, ababona abalandeli bokuhamba kakhulu. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ezinkulu, zinazo amazinga aphansi wamandla - kepha basazodinga ukujima.
Ama-Alsatians aseMelika kuzodingeka avivinye umzimba okungenani ihora ngosuku . Bazokuthokozela ukuhambahamba bezungeza indawo yangakubo noma umzuliswano wokulanda engadini ngoba bazothola ukuchitha isikhathi nawe.
Isikhathi esihle sokuzivocavoca noma sokuqeqesha i-Alsatian kulapho kubanda khona. Kunjalo okusebenza kakhulu ntambama kuze kube kusihlwa nasekuseni kakhulu.
Bangashisa uma kusesikhathi sasemini ngenxa yejazi labo eliphindwe kabili. Ngakho-ke lapho ilanga seliphumile, lindela ukuthi bazolala ngaphakathi noma bahlala endaweni epholile.
Lolu hlobo luyi uhlakaniphile , ngakho-ke uzoba nesikhathi esilula sokubaqeqesha.
Qala ngokulalela ukuqeqeshwa nokugqekeza, ikakhulukazi uma bezohlala ngaphakathi kwekhaya lakho. Ngosayizi wabo, kufanele bafunde besebancane ukuthi baziphathe kanjani.
Gwema ukujeziswa noma nini lapho uqeqesha i-American Alsatian yakho. Zibeke njengomuntu onothando i-alpha , eqinile kepha inikeza ukuphatha nokuphatha.
Njenganoma iyiphi inja, ukungaguquguquki nokuqiniswa okuhle kuzobasiza ukuthi bafunde ngokushesha.
Ungabona kule vidiyo ukuthi ama-Alsatia aqeqeshwa kanjani emakamu ama-doggy boot:
Ngemuva kokufunda ngobumnene be-Alsatian, sekuyisikhathi sokwazi ukuthi ungabanakekela kanjani.
Njengoba i-Alsatian iwuhlobo olukhulu, ibuye ibe nokugcinwa okuphezulu, ikakhulukazi ngesikhathi sayo sokuchitha.
Uhlelo lokuzilungisa lwase-American Alsatian
Lapho kufika isikhathi sasehlobo, imvamisa cishe ngoMashi kuya ku-Ephreli, ama-Alsatians azokhipha zonke izinwele zawo zangaphakathi ezingubeni zawo zasehlobo.
Njengoba zinejazi lazo nje elingaphandle lokuzivikela elangeni, kungcono ukugcina i-canine yakho ngaphakathi noma ngaphansi komthunzi ukumvimbela ekutheni angabi namanzi emzimbeni.
Ngaphandle kwengubo yangaphansi, kuyinto ejwayelekile ukuthi inja yakho ibonakale imnyama noma izacile ngalesi sikhathi. U-Alsatian uzozizwa elunywa, ngakho-ke msize ngokuxubha ijazi lakhe nge ikamu lensimbi ebanzi . Kwenze kanye ngosuku noma ngalo lonke olunye usuku ngesikhathi sokuchitha. Ngemuva kokuthi konke kuqhume, bazothululwa mahhala.
Lokho kusho nokuthi i-vacuum yakho izobhekana nomsebenzi omningi kusukela inqubo yokuchitha ithatha cishe inyanga . NgoSepthemba, ingubo yabo yangaphansi izoqala ukukhula futhi.
Ngaphandle kwesikhathi sabo sokuchitha noma lapho benengubo yabo yasebusika, kulungile ukuxubha i-Alsatian yakho okungenani kanye noma kabili ngesonto . Izinwele zabo ezinhle nazo azinaphunga futhi zixosha ukungcola, ngakho-ke bazodinga kuphela i- a ukugeza lapho kudingeka.
Okungenani kanye ngenyanga , hlola izindlebe zabo ukuthola noma yikuphi ukungcola noma ama-globs. Gwema ukutheleleka futhi uwahlanze ngendwangu emanzi ngesikhathi noma njalo emva kokugeza. Ngezipikili zabo, udinga kuphela unciphise kanye ngonyaka .
Ukondla i-Alsatian yakho
Nikeza i-American Alsatian yakho izinkomishi ezimbili ye i-premium bubble kibble ngosuku. Ungangeza impuphu yokwengeza inja ngamavithamini namaminerali.
Kungani kungenjalo phezulu isidlo sabo nge-cottage shizi, i-gravy, noshizi owenziwe shredded ukwengeza ukunambitheka? Kwesinye isikhathi, engeza inkukhu ephekwe kancane kokunye kokudla kwabo. Ngokuqinisekile bazoyithanda!
Kuma-Alsatians amancane, hlinzeka izinkomishi ezintathu kuya kwezine kokudla komdlwane omile ngosuku. Ngokudla kwabo kokuqala, bondle kuphela ama-kibbles. Ngezitsha ezilandelayo, ungangeza ne-gravy nenyama ehlanganisiwe, i-cottage shizi, noma inkukhu nelayisi ukubayenga ukuba badle kakhulu. Ungaqhubeka nalokhu kudla kuze kube yilapho umdlwane wakho uphenduka unyaka owodwa.
Qiniseka ukuthi awuyondli mahhala inja yakho ngoba ingathola isisindo esiningi. Bayeke bajwayele isikhathi esifanele sokudla, ngakho-ke i-canine yakho izothola inani elifanele lokuphaka kanye nazo zonke izakhamzimba azidingayo.
Njengamanje, akufanele kube nezinkinga zezempilo. Enye yezinto eziseqhulwini zikaSchwarz ekuthuthukiseni i-Alsatian ukuthi ibe wuhlobo oluphilile. Bakwenza lokhu ngokuqhubeka nomugqa nezinja ezingaguli. Kepha bekusekhona ezinye izinja ezihlangabezana nezinkinga zezempilo.
Nazi izifo ezitholakala kulolu hlobo eminyakeni edlule:
Ngaphandle kwakho konke lokho, uzothola ukuchitha isikhathi eside ne-American Alsatian yakho ngoba banempilo yokuphila Iminyaka engu-12 kuya kwengu-14 . Iphrojekthi ye-Dire Wolf isasebenza ukuthuthukisa impilo yabo nokuphila kwabo isikhathi eside. Bafuna ukunika lolu hlobo isilinganiso sokuphila seminyaka eyi-15 kuya kwengu-20, esifana nezimpisi zasendle. Uma bephumelela, inja yakho ingaba nawe iminyaka eyisithupha.
Ufunde konke nge-Alsatian - manje sekuyisikhathi sokwazi ukuthi malini nokuthi ungayithola kuphi.
Njengoba ziwuhlobo olusha uma kuqhathaniswa, le canine engajwayelekile ngeke ishibhile. Imidlwane yaseMelika i-Alsatian inebanga lentengo elijwayelekile le- $ 2,000 kuya ku- $ 3,000 .
Ngosayizi kadoti wemidlwane emi-5 kuye kwayi-12, bazoba nokubukeka nobukhulu obuhlukile obungathinta intengo yabo. Ngokuya ngomfuyi, indawo, kanye nekhwalithi yesitoko esizalanayo ukuthola uhlobo oluthile lomdlwane, abanye abantu base-Alsatia bangabiza imali efinyelela kumadola ayi-10 000.
Abafuyi Abahlonishwayo baseMelika base-Alsatian
Ukukusiza ukuthi uthole i-Alsatian yakho, nalu uhlu lwabafuyi abahlonishwayo abavunywa yiSchwarz ne-NAAC.
Izinja ezimnyama (Oregon)
Izinja ze-Dire Wolf zeVallecito (Washington)
Izinja ze-Dire Wolf zaseFennario (EColorado)
Ama-Alsatia aseMelika adinga ikhaya
Ngoba i-Alsatian uhlobo olusha nolungajwayelekile, kunzima ukuzithola ezindaweni zokutholwa noma ezindlini zokukhosela.
Uma ufuna ukusebenzisa noma ukuhlenga eyodwa, hlola Am. Ukutakulwa kwe-Alsatian , inhlangano engenzi nzuzo yokuhlenga, uma kukhona izinja ezitholakalayo.
Lapho uthola inja, kubalulekile ukuthi ucabangele ukuthi izolingana yini emndenini wakho noma endleleni ophila ngayo. Kufanele ukwazi ukuzibophezela ekuzilungiseni nasekusebenziseni izidingo zabo.
Ngakho-ke uma ungakaqiniseki ukuthi i-American Alsatian ingumngane ofanele wena, nakhu ukuthi baqhathanisa kanjani nezinye izinhlobo eziphezulu ezifana nezempisi.
I-American Alsatian vs. Shiloh Shepherd
I-American Alsatian iyi kuncane kune UShiloh Shepherd . Kunjalo akusebenzi kangako futhi kuzodinga ukuzivocavoca umzimba okuncane kunoShilo. Uma unezinye izilwane ezifuywayo, thola i-Alsatian ngoba uShiloh Shepherds akazona izilwane ezifuywayo.
IShilo ingathatha izinhlobo eziningi zemisebenzi efana nenja yokwelusa noma i-watchdog. Bavame ukukhonkotha; ngakho-ke uma ufuna i- inja ethule kakhudlwana , kungcono ukuthola i-Alsatian yaseMelika.
I-American Alsatian vs. Inja yaseMelika YaseMelika YaseMelika
Inja yaseMelika yaseMelika noma i-NAID ( umthombo )
I-American Alsatian iyi okukhudlwana kune Inja YamaNdiya Omdabu waseMelika (NAID), kepha banesisindo esicishe silingane.
Ama-Alsatians anengubo ende edinga ukuzilungisa okwengeziwe . Banazo futhi izinketho eziningi zombala wejazi .
I-NAID ikhonkotha kakhulu, ngakho-ke uma ukhetha inja ethulile, thola i-Alsatian. Ama-NAID nawo aphelele kubantu abanendlela yokuphila esebenzayo ngoba bangabazingela nabadobi.
Zombili lezi zinja ziyizinhlobo ezinempilo, kepha i-NAID inezinkinga ezimbalwa zezempilo futhi iphila isikhathi eside kune-Alsatian.
I-American Alsatian vs. King Shepherd
Inkosi uMelusi ( umthombo )
I- Inkosi uMelusi ingxube kaMelusi waseJalimane, uShiloh Shepherd, u-Alaskan Malamute, noGreat Pyrenees. Yize unazo zonke lezi zinhlobo ezinkulu zabazali, i-Alsatian iyi okukhudlwana ukwedlula lokhu okuhlanganisiwe.
IKing Abelusi iwulungele kangcono umsebenzi, ikakhulukazi ukwalusa kanye nomhlambi. Bangaba futhi yinja yokuqapha ngoba bakhonkotha njalo. Uma ufuna i- ukuzala buthule , i-Alsatian iyindlela engcono.
Uma ubulokhu ufuna i i-canine enkulu yomngane , iAmerican Alsatian ikhandidethi enkulu. Enye ibhonasi banayo amazinga aphansi kuye kwaphakathi nendawo , ilungele labo abathanda ukuphumula emakhaya abo.
Lolu hlobo luyi kulula ukuqeqesha , kubenza babe ukukhetha okuhle kwabanikazi bezinja okokuqala ngqa. Futhi ziyi- uhlobo olunempilo , ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngalokhu kuvakashelwa kwezilwane.
Uma uhlala efulethini elincane, khumbula ukuthi le nja inkulu futhi izothatha isikhala esiningi. Ama-Alsatians alungele kangcono amakhaya avulekile njengalezo ezinamagceke noma izindawo zasemakhaya.
I-Alsatian iyi ukugcinwa okuphezulu isilwane, ngakho-ke kuzodingeka unikele isikhathi esithe xaxa kuzidingo zabo zokuzilungisa. Lezi zichitho azibafanele labo abanezifo zomzimba, nalabo abangakwazi ukuphatha izinwele zezinja kuyo yonke indlu yabo.
Zingabukeka njengezimpisi, kodwa ziyizidalwa ezinobungane nezithambile. Ngokuqinisekile uzothanda ukuba nalesi sigebenga esimnene ekhaya.
Ngabe uhlela ukuthola i-American Alsatian? Singathanda ukuzwa ngohambo lwakho. Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi.
Kungani iShiba Inu iyinja ethandwa kakhulu eJapan?
Izizathu eziyi-10 zokuthi kungani izinja zikhotha izinyawo, abantu, ubuso, izinyawo nezindebe
amagama amhlophe wezinja zomalusi waseJalimane
Izinhlobo zezinkunzi ze-pit bull
ukwakheka komlenze wenja
ingabe ama-shorkies akhonkotha kakhulu
jack russell terrier chihuahua xuba amanani
luhlobo luni lwenja olubukeka njengebhere encane